६ वर्षीया युट्युब स्टारले किनिन् ८० लाख अमेरिकी डलरको घर ! - Experience Best News from Nepal
६ वर्षीया युट्युब स्टारले किनिन् ८० लाख अमेरिकी डलरको घर !
दक्षिण कोरियाकी एक ६ वर्षीया युट्युब स्टारले लाखौँ डलर पर्ने एक पाँच तले घर खरिद गरेकी छिन् । ३ करोड सब्सक्राइबर भएकी बोरामले अभिभावकद्वारा खडा गरिएको बोराम फेमली कम्पनीमार्फत् सो घर खरिद गरेकी हुन् ।
कसरी जन्मियो प्रेसर कुकर ? जान्नुहोस् रोचक तथ्य !